Banyere Anyị - Hebei Moyo Technologies Co., Ltd.
TAB Ntọala dị na mpaghara Shijiazhuang Economic and Technology Development Zone, Hebei Province, China, na okirikiri mmepe akụ na ụba Beijing-Tianjin-Hebei, n'akụkụ okporo ụzọ Beijing-Guangzhou, Port Tianjin, na ọdụ ụgbọ elu Shijiazhuang. Ọnọdụ ala ka elu yana njem dị mma.
Ụlọ ọrụ ahụ na -arụ ọrụ njikọta nke ụlọ ọrụ na azụmaahịa, ma na -emepụta ala ụlọ SPC kemgbe 2014. Ọ na -ejikọ mmepe, nyocha, imepụta na ire nke ala SPC. Ụlọ ọrụ ahụ na -ekpuchi mpaghara nke 70,000 square mita, yana ahịrị mmepụta mbata 3 nke German na -akpaghị aka zuru oke, yana ọnụ ahịa mmepụta kwa afọ nke nde mita 3.24. A na -ebupu ngwaahịa ahụ n'ihe karịrị mba 40 na Eastern Europe, United States, Middle East, South America, na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
N'ihe banyere ịdị mma ngwaahịa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, asambodo ọhịa FSC, nyocha ndị ọzọ nke ọdịnaya formaldehyde na asambodo ndị ọzọ. Teknụzụ ụlọ ọrụ dị elu na-ejikwa njikọ na-ejikọ njikọ sitere na akụrụngwa ruo ngwaahịa emechara, wee nweta ngwaahịa dị elu dị ka onye ndu, mejuputa atụmatụ ika.
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke "ịrapara na njikwa klaasị mbụ, na-emepụta ngwaahịa klaasị mbụ, ma na-enye ọrụ klaasị mbụ", na-agbaso ụzọ mmụta, mmepe na ihe ọhụrụ, na-agbaso usoro ụlọ ọrụ ụlọ na nke mba ọzọ, mgbe niile na -aga n'ihu na mmepe teknụzụ mba ofesi, na -akwalite ogo ngwaahịa mgbe niile, ma na -emelite echiche imewe. Meziwanye usoro ọrụ, gbalịsie ike maka izu oke na izu oke.
Companylọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya na mmepe nke ala plastik nke China, nwere ọhụụ na-ele anya, echiche zuru ụwa ọnụ, yana ụkpụrụ nke ndị ahịa na mbụ, na-akwalite mmepe nke ụlọ nrụpụta ala China, ma na-atụnye ike nke ya na nwelite mba China. ụdị ụlọ ọrụ.
Kemgbe 2020, n'ihi COVID-19, iji wee jeere ndị ahịa ozi nke ọma ma rite uru na mmepe azụmaahịa ha, anyị nwekwara ike ịkwado ndị na-emepụta kredit ngwaahịa ndị metụtara ya maka ndị ahịa.
1. Skirting emeputa
2. Ndị na -emepụta ogwe osisi PVC
3. Ụlọ ọrụ ngere ngere
N'otu oge ahụ, iji kwekọọ na ngwongwo dị arọ na nke dị arọ, anyị na -akwadokwa ndị ahịa ụfọdụ akwụkwọ ahụaja 3D, n'ihi na ala dị oke arọ, nke ga -ebute oke ohere na akpa. Ọ bụrụ na enwere ike ibupu ya na akwụkwọ ahụaja 3D, ọ nwere ike iji ohere nke akpa wee chekwaa ego.
Nabata ndị ahịa si mba niile dị n'ụwa iji kpaa nkata azụmahịa. Anyị ga -eji omume arụ ọrụ kacha arụ ọrụ, nke na -arụ ọrụ nke ọma yana nke ezi uche dị na ya iji nyere ndị ahịa aka ịgbasawanye ma zụlite azụmaahịa ha iji hụ na ịbawanye uru ndị ahịa.